Arrinta sakhiray xaqiiqo ah iyo mid ka mid ma diidi karto oo dhan sabab u ahaa xaqiiqada ah in Kies buggy mar walba u abuuraan rabshad ah user iyo xitaa haddii daaqadaha loo xiraa cusub Kies ma shaqeyn doonto ilaa ay calaamaddu ku taal. Sabab kasta haddii Kies ay shaqadeeda bilowdo ku Windows 8 ama ka dib version markaas waa arrin aad caadi u ah in ay ka hor imanaysa la jadwalka iyo dhibsadayoo dhacdooyinkii users ah.
Tutorial waxaa loo qoray si loo hubiyo in ugu fiican ayaa loo gudbiyey in user iyo jid aan xiddig oo keliya, laakiin sidoo kale u ogolaataa user si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican ee arrintan la xiriira. Tutorial Tani waxay sidoo kale ku bari doonaa dadka isticmaala in sida arrinta Kies ku badiyeen 8 la xalin doono karo oo xal kuwaas oo sidoo kale loo gundhig doonaa Screenshot si user ah natiijada ugu wanaagsan ka heli kartaa. Liiska arrimaha ugu sareeya iyo xal la xiriira in sidoo kale la qayb ka mid ah tutorial taas uga dhigay reer doonaa.
Awoodin inay helaan software in la aqoonsado qalab
Waa mid ka mid ah arrimaha ugu badan waa in wajiga user ah in arrintan la xiriira oo waa la xalin karaa xasilloon si fudud sida user ma yeelan doonaan in ay la rakibo software dibadda ka qabtaan oo dhan dhisay qalabka barnaamijka hubiyo in wixii kaloo ka dhigi doonaa waxaa loo sameeyaa hab ah in uu yahay xiddig iyo outclass. Ka dib markii yihiin tallaabooyinka oo user a raaco waa in arrintan la xiriira iyo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in amarka waa isku mid oo tallaabo lahayn waa in la boodayo haddii xallinta arrinta ayaa loo baahan yahay:
1. toobiye Kies on desktop-ka waa in la xaq u riixi si loo hubiyo in "waafaqsan dhibta" la doorto. Haddii sabab kasta ha user uusan haysan toobiye ku desktop-ka dibna midig gujinaya Kies.exe ee sahamisa daaqadaha sidoo kale waxay keeni doontaa in icon la mid ah oo halkan natiijada:
2. saaxir doono ka dibna aad u bilowdo iyo user inay hubiyaan in isku day lagu talinayaa in goobaha ay tab waxaa riixi si loo horumariyo habka ka dhigi doonaa:
3. suuqa kala socda user waa in la hubiyo in imtixaanka barnaamijka la riixi in ay sii wadi arrintan la xiriira sameeyo. Waxaa bilaabaysa barnaamij Kies iyo sidoo:
4. qalad ayaa la xalin iyo hadda user uu guji Haa badbaadiyo, kuwaas oo goobaha barnaamijkan:
5. user ayaa markaas uu leeyahay in la xiro troubleshooter si loo hubiyo in nidaamka halkan hasa
Samsung Kies Aan La shaqaynta Windows 8
Waa mid ka mid ah arimaha ayaa sidoo kale loo magacaabay sababta ugu xumaa ee dhibaatada arrintan la xiriira. Marka arrintan dhacdaa user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in jidka casriga ah ugu xeel dheer la qaato sida ay tahay sida keliya si aad u hubiso in arrinta aan lagu xalin kaliya laakiin user sidoo kale helo natiijada ugu wanaagsan:
1. user wuxuu u baahan yahay si ay u sahamiyaan jidka u bilowdo hawsha iyo tani waa C:> files barnaamijka> Samsung> Kies.
2. file ay magaca Kies.exe.config waa in la helay iyo furay iyadoo la kaashanayo buugayga ay xaq u riixaya.
3. Waxaa jira laba files ku qoran buugayga in ay leedahay in la tirtiro weligiis si aad u hesho xalliyo arrinta sida kuwanu waa kuwa oo loo hubiyo in arrintan ay sii socoto iyo sidoo kale ay hor joogsan jidka user si aad u hesho natiijo laga cabsado in arrintan la xiriira . Files waxa laga heli karaa adigoo riixaya Ctrl + F iyo files dhajinta iyo . Marka files laga helay ay tahay in la tirtiro si loo hubiyo in nidaamka halkan dhamaado iyo buugayga markaas waa in la badbaadiyey adigoo riixaya Ctrl + S.
Habka kor lagu soo sheegay waa cadaalad ah oo fudud oo si sahlan tahay in la raaco iyo sidoo kale hubin doona in user helo natiijada ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira. User ayaa sidoo kale loo baahan yahay si loo hubiyo in halkan tallaabooyinka ay tahay in la raaco, si la mid ah, taas oo ay la soo sheegnay si arrintaas waxaa waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira.
Waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican in loo arki karaa kale si ay u Kies sabab u ahaa xaqiiqada ah in mana aha buggy hana ka dhigaysa diinta ku adag tahay user. Waxa kale oo ay u hubiyaan in ugu fiican ayaa la siiyaa si ay u user hab is dajiyaan oo siman oo sidaas daraaddeed wadajir waayo-aragnimo user xaqiiqdii waa mid fiican in la hubiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira. Si ka duwan Samsung Wondershare joogto ah ka shaqeeya horumarinta iyo imtixaanka Bulshda guud ee barnaamijka oo uu soo halkan ku xusan oo waxaa la sameeyaa oo keliya in la hubiyo in dhammaan dadka isticmaala ku daaliya isticmaalaya Kies waa in la soo jiidatay dhinaca barnaamijka si ay u dareemaan kartaa farqiga.
> Resource > Samsung > Samsung + Kies + Windows 8 = gaabinta !!!